FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CHIPIN - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Chipin
Alika mifangaro mifangaro Chihuahua / Miniature Pinscher
Ruby the Chipin dia ¾ Chihuahua ary ¼ Min Pin
Ny alika dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny Min Pin . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
asehoy ahy ny sary Siberia huskies
'Ity i Koda amin'ny 1 1/2 taona. Mpifangaro Min Pin / Chi izy. Noraisinay avy any Petco izy fony izy 6 volana. Ny fitsambikinana, ny fihazakazahana ary ny filomanosana dia hetsika isan'andro ho an'ity zaza matanjaka ity. Ny tena zava-dehibe dia tia mihinana ity zazavavy ity, hany ka nianatra ny hitsambikina amin'ny countertops izy ary hihinana izay rehetra tazana! Na eo aza ny halehibeny kely dia tiany ny eo akaikin'ny kamio lehibe tsy mataho-dàlana, ao anatin'izany ny kamiaon-drainy nitaingina ny dadany izay tsy manana olana akory raha mitsambikina amin'izay. Ary koa, mitondra ny kamiaon'ny dadany. Tiany ihany koa ny miakanjo ho an'ny Halloween. Rehefa matory (aorian'ny andro lava nilalaovany) dia tsy maintsy eo ambanin'ny fonony eo akaikinao izy (kisoa lehibe fandriana!) '
'I Gulley the Chipin puppy amin'ny 8 herinandro! Teraka tamin'ny andro krismasy izy. Mipetraka any Massachusetts izy, fa avy any Fargo, ND. Lehilahy kely mahatalanjona izy, feno fiainana sy angovo. Tiany ny milelaka ny rantsan-tongotry ny olona, ​​ary mipetraka ao amin'ny efitrano fatoriana lehibe feno tovovavy tanora manao flip-flop, ka faly foana izy! Ny zavatra tena tian'i Gulley hatao dia ny manohina ny tànan'ny olona amin'ny kitapony, toy ny olona kely. Raha tsy manao an'izany izy dia mipetraka eo am-baravarankely toy ny saka, mijery izao tontolo izao mandalo! 6 volana izy izao ary milanja 9 lbs., Ary manana volom-borona malefaka sy mamiratra indrindra izy! Tian'i Gulley ny fikosehana ny kibony, ary raha manome kilalao masiaka ianao dia ho namanao akaiky indrindra mandritra ny fiainana izy :) '
'Ity ny Zoee, ny Chipin (Chihuahua / Miniature Pinscher karazana mifangaro). Milanja 3 lbs izy. ary tombanana ho 7-8 lbs. rehefa lehibe. Ity hybrid ity dia toa ny alika am-paingotra, tena malala, haingana, mavitrika, rafitra fanairana kely, marani-tsaina ary tia mangalatra ny sisin-dambanao amin'ny kiraro tenisinao. '
Bruno the Chipin (anaram-bosotra Cheekie) eo amin'ny 2 taona eo ho eo, milanja 16 pounds— 'Chihuahua 50% izy ary 50% Pin Pin.'
Minnie the Chipin puppy (Chihuahua Min Pin mix) amin'ny 6 volana - hoy ny tompony, 'Izy no alika mamy sy milalao indrindra.'
Zoey the Chihuahua / Min Pin mix (Chipin) - 'Eto amin'ity sary ity dia 9 volana izy, 18' lava, 12 'eo an-tsorony ary milanja 8 kilao.'
Snoop the Chipin (Min Pin / Chihuahua mx dog) amin'ny 9 volana
Buddy the Chi-Pin amin'ny faha-4 taonany— 'Ity ny Chi-Pin' Buddy '15 kilao. Haingam-pandeha tokoa, nanisy famantaranandro azy tamin'ny bisikiletako tamin'ny sprint 26mph. Alika fialofana izy ary nanomboka teo dia nanao ny fiofanana niaraka tamin'i Cesar Millan izahay ary lasa kely toetra izy. Tiany ny mihazakazaka miaraka amin'ny alika haingana be ary tsy manana olana amin'ny filazana azy ireo rehefa miala amin'ny andalana izy ireo. Rehefa tsy mihazakazaka izy dia mandro masoandro tontolo andro. Tsy ho faly amin'ny alika mahafinaritra toy izany. Hitady an'io fangaro io amin'ny ho avy! '
'Ity i Shyla. Izy no fitiavana 2 taona amin'ny fiainako! Tena marina, izy no cutest indrindra hatramin'izay. Milanja 5,5 lbs., Ity alika ity dia toa gidro kokoa noho ny alika. Ny olona izay maheno azy midina lavitra ny efitrano amiko dia nihevitra fa zazakely izy, vorona, saka, sns. Amin'ny alàlan'ny firesahany sy iantsoany ahy. Sariaka be izy nefa saro-kenatra ihany koa, Shyla no anarany. Heveriny fa saka izy, ary samy tia ny saka sy ny alika. Ny olombelona no tena saro-kenany indrindra! '
'Ity i Ritzy, antsasaky ny Chihuahua ary antsasaky ny Min Pin (Chipin). 3 taona amin'ity sary ity izy, tia olona ary tia ny saina. '
Jereo ohatra hafa momba ny Chipin
Sary Chipin 1
Sary Chipin 2
Lisitry ny alika kely mifangaro Pinscher mifangaro
pics manga pitbull alika kely
boxer australian mpiandry ondry afangaro alika kely
dachshund sy jack russell mifangaro
Charles mpanjaka cavalier voaharo poodle
shih tzu schnauzer mifangaro ny androm-piainany